Ciidamada NISA oo xalay gacanta ku dhigay gaari waxyaabaha qarxa iyo hub – STAR FM SOMALIA
Ciidamada NISA oo xalay gacanta ku dhigay gaari waxyaabaha qarxa iyo hub
Laamaha ammaanka, ayaa waxay xalay Magaalda Muqdisho ku fashiliyeen gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa, oo la doonaayay in weerar looga gaysto.
Hawlgal gaar ah oo Ciidanka Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka ka sameeyen xaafadda Sey Biyaano ee Degmada Hodan, ayay ku soo qabteen gaarigan oo noociisu uu ahaa NOAH.
Hawlgalkan, ayaa sidoo kale lagu soo qabtay laba qori oo AK47, gantaalka garabka laga tuuro iyo laba xabo oo gumaca qoriga sabanka/baasuukaha loo yaqaano.
Ciidanka Nabad Suggida, ayaa waxaan jirin cid ay hawlgalkan u soo qab qabteen, marka laga soo taggo in ay fashiliyeen gaarigan oo loo adeegsan rabay weerar ka dhan ah Caasimadda.
Ciidanka Miino Baarista oo la wareegay gaarigaasi, ayaa ku guuleystay in si nabdoon ay u kala fur furaan walxihii qarxa ee lagu soo raray.
Tallaabada lagu fashiliyay gaarigan, ayaa ka dambeysay markii dadka deegaanka ay ku wargeliyeen laamaha ammaanka.
Al Shabaab oo si wayn kaga biyo diidan jiritaanka Dowladda Somaliya, ayaa geed gaaban iyo mid dheerba u fuulaya, sidii ay u beegsan lahaayen Masuuliyiinta Dowladda.
Mareykanka oo markii u horeysay ka hadlay khasaaraha ay geystaan duqeymaha Drones